Merchant Services & Business Solutions
Business account is an account aimed for Business and organizations.
Business account can perform the functions of personal account and moreover it can also perform Online Business including selling and providing services and shopping dealing with many customers from Online.
The Amount of Add Funds into MyanPay Business Account
You can add funds from at least 10,000 Kyats to 100,000,000 Kyats at most.
Your MyanPay Business Account must have at least 10,000 Kyats.
The Requirements for creating Business Account
You must beaMyanmar citizen and your age must be over 20 years.
You must haveaNational Registration Card (NRC).
You must haveamobile phone number of Myanmar (MPT, MecTel, Telenor, Ooredoo).
You must have the Registration card of Organization, company and municipal.
MyanPay gives services that can receive money very easily for every payments in your Online Business.
By using MyanPay in your online Business, you can receive money from Customers and Members with various payment methods.
You can make simple and easy invoice with MyanPay and can send invoice to the customers.
Your customers can pay money to you via Myanpay using the convenient payment methods.
MyanPay provides services for you with all payment systems in Myanmar.
Your customers can pay money to you via MyanPay using various payment methods such as Bank Transfer, bank account, MPU Debit/Credit Card Payment, Mobile Banking, Internet Banking, E-Wallet, Mobile-Wallet, Mobile Money and Cash Transfer.
By using MyanPay’s Shopping Cart services, you can immediately perform the Online Shopping Website inafew minutes.
To use that service, you can immediately start and you don’t need to know Programming Knowledge and Program Coding.
MyanPay allows you to add 100,000,000 Kyats as the maximum balance in your business account for online business.
Therefore, you can perform many payment transactions and can savealot of received money.
You can withdraw money from MyanPay Account Balance every time.
MyanPay has Merchant Discount Rate (%) relating with service fees for Online Merchants and Business Users.
The more the amount of received money using MyanPay, the less the MyanPay service fees.
Business Account သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော Account အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
Business Account သည် Personal Account ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အပြင် Customers အမြောက်အမြားနှင့် ဆက်ဆံ၍ Online မှတဆင့် ဈေးရောင်းချခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း စသည့် Online Business လုပ်ဆောင်ချက်များစွာအား ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
အနည်းဆုံး ငွေကျပ် တစ်သောင်း (၁၀,၀၀၀) ကျပ်မှ စ၍ အများဆုံး ငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀) အထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
MyanPay Business Account တွင် အနည်းဆုံး ငွေကျပ် တစ်သောင်းကျပ် လက်ကျန်ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Business Account ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံသား၊ အသက် (၂ဝ) နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ Mobile ဖုန်း (MPT, MecTel, Telenor, Ooredoo) တစ်မျိုးမျိုး ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။
အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင် (သို့) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (သို့) စည်ပင်မှတ်ပုံတင် စသည့် ခိုင်လုံသော အထောက်အထား ပြသနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
MyanPay သည် လူကြီးမင်းတို့၏ Online စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေပေးချေမှုအား အလွယ်တကူ ငွေလက်ခံနိုင်ရန်အတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် MyanPay အား အသုံးပြုရုံဖြင့် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ Customer များ၊ Member များထံမှ ငွေလက်ခံရယူနိုင်ပါသည်။
MyanPay ဖြင့် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော ငွေတောင်းခံလွှာ Invoice အား ပြုလုပ်နိုင်ပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ Customer များထံသို့ ငွေတောင်းခံလွှာ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ Customer များမှ အဆင်ပြေလွယ်ကူမည့် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးအား အသုံးပြု၍ MyanPay မှတဆင့် လူကြီးမင်းတို့ထံသို့ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
MyanPay သည် လူကြီးမင်းတို့အတွက် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ Payment စနစ်များအားလုံးဖြင့် ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ Customer များမှ Bank Account, Bank Transfer, MPU Debit/Credit Card Payment, Mobile Banking, Internet Banking, E-Wallet, Mobile Wallet, Mobile Money, Cash Transfer စသည့် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ လူကြီးမင်းတို့ထံသို့ MyanPay မှတဆင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
MyanPay ၏ Shopping Cart Services အား အသုံးပြု၍ Online ပေါ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း (Online Shopping Website) အား မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ အသုံးပြုရန်အတွက် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် Programming Knowledge များ၊ Program Coding များအား သိရှိရန် မလိုအပ်ဘဲ အလွယ်တကူ ချက်ချင်း စတင်နိုင်ပါသည်။
MyanPay သည် Online စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Business Account အတွင်းသို့ ငွေကျပ် သိန်း (၁၀၀) အထိ အများဆုံး သိမ်းဆည်းခွင့်ပေးထားပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ငွေလက်ခံမှု Payment Transaction အား အများအပြားအား ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး လက်ခံရရှိငွေများကို ပိုမို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ MyanPay Account Balance မှ ငွေများအား အချိန်မရွေး ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
MyanPay တွင် Online Merchant များ၊ Business User များအတွက် Service Fee ၀န်ဆောင်ခ နှုန်းထားများနှင့် ပတ်သက်၍ Merchant Discount Rate (%) အစီအစဉ်များ ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် MyanPay အသုံးပြု၍ လစဉ် ငွေလက်ခံမှု ပမာဏ များလာလေလေ၊ MyanPay Service Fee နှုန်းထားများ လျော့နည်းလေလေ ဖြစ်ပါသည်။